Kaararka: Kaararka Bangiga ee Ku-Xidhan Kaarka | Martech Zone
Kaararka: Kaararka Bangiga ee Ku-Xidhan Kaarka
Sabtida, Oktoobar 19, 2013 Khamiista, Oktoobar 17, 2013 Douglas Karr
Awoodaada inaad bartilmaameed ka dhigato macaamiisha iyadoo lagu saleynayo juqraafi iyo taariikhda wax iibsiga way sii socotaa. Hay'adaha maaliyadeed waxay hadda furi karaan albaabka abaalmarinta, barnaamijyada daacadnimada iyo deeqaha si toos ah loogu iibsado iyadoo la isticmaalayo kaarkaaga bangiga. Suuq-geynta Kaarka Ku Xidhan (CLM) waa marka suuqleydu ay macaamiisha si toos ah ugala soo xiriiraan bayaankooda bangiga ee internetka. Xaqiiqdii, Bank of America wuxuu horeyba u adeegsanayaa Cardlytics-ka awood BankAmeriDeals.
Xayeysiiyeyaasha, Kaararka loo yaqaan 'Cardlytics' waxay gaarsiiyaan bartilmaameed miisaaman, qiime-bixin-wax-qabad iyo cabir sax ah
Bartilmaameedka macaamiisha iyadoo lagu saleynayo dhaqankooda: goobta, inta jeer, wadarta kharashka.
Samee olole loogu talagalay koox macaamiil gaar ah.
Qiyaasta Macaamiisha: safarrada macaamiisha oo siyaadaya, iibinta, dabeecadda iibsiga kadib.
Xayeysiiyayaashu waxay kaliya bixiyaan natiijooyinka: waxaa lagu cabiray iibka kororka.
Macaamiisha, Kaararka loo yaqaan 'Cardlytics' waxay u fidisaa khibrad shaqsiyadeed oo fudud oo soo jiidasho leh
Macaamiisha waxay arkaan xayeysiis shaqsiyeed oo ku saleysan iibsigii hore.
Macaamiisha ayaa doorta xayeysiiska iyo abaalmarinta isla markiiba waxaa lagu dhejiyaa kaarka amaahda ama kaarka amaahda.
Macaamiisha si fudud ayey wax u dukaameystaan ​​oo ay wax ku bixiyaan kaar.
Macaamiisha waxay kasbadaan lacag kaash ah oo lagu celiyo koontadooda.
Bangiyada tooska ah ayaa hadda ah 53% macaamilada bangiyada iyo Cardlytics waxay keeneen ku dhowaad $ 512MM kharashka tafaariiqda ee Q2 2013!
Tags: kaarka bangigakaararkadaacadnimoabaalgudyo
Brightcove: Madal Fiidiyaha Khadka Tooska ah ee Internetka
Khabiir: Isbadalka Suuqgeynta Kanaalka